Ukuqhwanyaza ikhibhodi ekuvumela ukuba ukhethe ngakumbi ngokhiye ngamnye | IPhone iindaba
Blink yinkqubo ye-keyboard leyo nceda I-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6 Plus abasebenzisi ukuya bhala ngesandla esinye. Isicelo senza ubungakanani kwakhona bekhibhodi ngokuyinciphisa ngasekhohlo okanye ngasekunene (kuxhomekeke ekubeni ulinxele okanye ulikhohlo) ukuze ufikelele kuzo zonke iileta.
Olunye uphuculo lwekhibhodi kukuba inayo izitshixo ezinikezelweyo ikoma, cima igama kwaye ucime yonke into. Kwabo basebenzisa okuncinci, sinamaqhinga okubamba isitshixo kwaye ukhetho luyavulwa, oluya ngaphaya kweempawu, kubandakanya emoji.
Ukwenza ikhibhodi ngokwezifiso izise uthotho contact bahlaziya ngokuhamba kwexesha. Usizi kukuba okwangoku kuphela ngesiNgesi, emva koko kuphela kolu lwimi esinokuthi sisebenzise ithuba lokukhetha iingcebiso zamagama kunye nokugqibezela.
Kwinguqu yabo yamva nje bazise amanqaku amaninzi, ingxaki kukuba baxhomekeke kuwe ekunikezeleni «ukufikelela ngokupheleleyo«, Oko kuthetha ukuthini. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya ndwendwela isikhokelo sethu ku ufakelo lweekhibhodi zomntu wesithathu.
Ngoku ungasebenzisa oobhontsi bakho ukwahlula ikhibhodi, ungabhala unobumba omkhulu ngokucinezela oonobumba abakhulu kunye nokukhulula uxinzelelo kwileta esiyifunayo ngoonobumba abakhulu, amagama amatsha kunye ne Umxholo omtsha kwimemori kaSteve Jobs.
Uqikelelo kunye nezitshixo ezicacileyo sele zilungiselelwe ubungakanani obutsha obuthe tyaba ye-iPhone 6, ukunciphisa oopopayi ukwenza ukuthayipha kusebenze ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Ukuqhwanyaza ikhibhodi ekuvumela ukuba ukhethe ngakumbi ngokhiye ngamnye
Ucinga ntoni ngolu vavanyo lwebhetri lusemthethweni kwabo basebenzisa nzima? http://youtu.be/aoqQ1qu-ed4
Uyilungisa njani i-iTunes WiFi syncing nge-iOS 8